Afaka mandoa vola amin'ny fitaterana ve aho? / Afaka manangona anareo aho ny vola manokana satria tsy manana karatra fiara.
Matahotra aho amin'izao fotoana izao ny hetsika ataonay dia voafetra ihany amin'ny trosan'ny carte / debit card sy Paypal. Izany dia hahazoana antoka fa ny mpanjifantsika dia mahazo ny fiarovana ny mpanjifa ary koa ny fandraharahana ataontsika. Amin'ny hoavy dia mety ho afaka manaiky vola amin'ny fepetra ihany isika. Raha tsy manana ny fomba fandoavam-bola araka izay voalaza ianao dia mety hahazo olona hanampy anao amin'ny fandoavana voalohany :)
Paypal dia manolotra fiarovana ny mpividy ary manohana ny mpanjifa amin'ny fanomezana ny vavahadin-tsoam-panjakana sy ny paikady tsara. Izany no antony itorianay ny fampiasana Paypal mba hamenoana ny fivarotana ataonareo eto safidy raha tsy misy ny karatry ny carte de crédit.
Raha manana kaonty Paypal ianao, mialà sasan-tsafidy amin'ny Paypal sy fidirana mba hamenoana ny fividiananao mifanaraka amin'izany.
Ahoana raha tsy manana kaonty Paypal aho ?!
Aza manahy satria tsy mila manana kaonty PayPal ianao mba hividy: azonao atao ny mampiditra mivantana ny angon-drakitrao amin'ny karatra amin'ny PayPal ary hamita ny volanao. ianaotsy mila mandefa kaonty PayPal na tsia.
1) MIEZAHA HATRAMIN'NY "FANAZAVANA AO AN-TSOKATRA MAHARITRA"
Raha toa ny pejy PayPal anao dia toy izao manaraka izao: tsindrio fotsiny amin'ny "Mandoa vola miaraka amin'ny karatra" na "Mahaiza mitsidika toy ny vahiny".
2. AZA MIVOAKA DATY
Adiresy, mailaka sy nomeraon-telefaona dia mety hangatahana ihany koa miankina amin'ny firenenao.
Rehefa vita dia tsindrio ny "Review and Continue".
3. MANDEPAKA HITONDRANA "
4. MANDEHANA "TSY MISY, AOKA IANAO" TSY NANAIKY IZAY NAMPIASA ANTSIKA. FANDIKANA
Vita HIARAKA AMINAREO MANDRAKARIVA HAHATAKATRA AO AMIN'NY FITIAVANA EO AMINAREO AO AMINAREO NY FOKO! ENJOY SHOPPING :)
Ny politikam-piverenanay dia maharitra 30 andro manomboka amin'ny daty ahazoanao ny vokatra (IE dia manasonia ny tolotr'asa eo an-toerana anao). Raha efa lasa ny 30 androany, indrisy izahay tsy afaka manolotra anao famerenana na fifanakalozana.
Raha toa ny fahadisoantsika (mifangaro, diso amin'ny fahatongavana), dia tsy maintsy mandoa vola amin'ny fandefasana entana izahay :)
Mba hahazoana ny fiverenana dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fomba tsy ampiasaina sy ny toe-javatra efa azonao izany. Tsy maintsy ao anaty fonosana voalohany ihany koa izy.Mba hamenoana ny fiverenanao dia mila receipt na porofo momba ny fividianana izahay.Azafady azafady alefa any amin'ny mpanamboatra ny fividiananao. Mariho tsara fa tsy ho voarakitra amintsika ny saran-dàlana hiverina. Manoro hevitra ny mailaka izahay amin'ny ekipa mpanohana amin'ny antsipiriham-panontaniana feno.
Ho amin'ny fangatahana fangatahana fangatahana, azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tranokalanay
Rehefa mividy ny baikonao ianao, dia afaka ora vitsivitsy 24 hanafoana ny baiko. Hanome vola feno ianareo raha manafoana ny baiko ao anatin'ny ora 24. Na izany aza raha efa lasa ny ora 24 hatramin'ny nanaovanao ny baiko, dia tsy maintsy miandry ny kitaponao ianao vao tonga any aoriana.
Raha ankatoavina ianao, dia havaozina ny volanao, ary ny fampindramam-bola dia ampiharina avy hatrany amin'ny karatra fiasanao na ny fomba fandoavam-bola voalohany, ao anatin'ny andro maromaro miankina amin'ny mpivaro-bola.
FITENY TSY MANAIKY
Raha nanao izany rehetra izany ianao ary mbola tsy nahazo ny volanao indray, azafady mba mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tranokalanay
Q- Postcode tsy maintsy mandefitra baiko fa tsy manana iray ao amin'ny fireneko aho. Ahoana ny fomba hametrahako baiko?
A- Raha tsy manana fehezan-tsoratra mailaka ny adiresinao dia midira amin'ny "11111" ary mametraka ny baiko araka ny tokony ho izy. Amin'izany fomba izany, dia ho fantatsika fa tsy misy code postala hampidirina
AHOANA NO HANANANTSIKA HANDRAIKITRA NY FAHALALANA?
Ny baiko matetika dia manomboka amin'ny 5 andro hivezivezy alohan'ny sambo - amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra. Mety mandritra ny andro XMUMX mandritra ny andro fitsaboana.
AHOANA NY FIVAVAHANA?
Ny baiko amerikana dia alefa amin'ny USPS ary ny International Orders dia alefa arakaraka ny foibe fahombiazan'ny vokatra.
Transit Times ho any Etazonia: 5 - 20 Andron'ny asa
Fotoanan'ny transit ho an'ny International: 10 - 21 Tolotra androany
Ny fetran-tseranana mandritra ny fotoana fohy dia voaray amin'ny herinandro 3.
Misy toe-javatra tsy misy fifehezana (loza voajanahary, fialantsasatra, toetrandro, sns) izay mety miteraka fanemorana entana. Na dia ho tonga ara-potoana aza ny ankamaroan'ny fonosana, dia mety hisy toe-javatra sy fahatarana mety ho hitan'ny mpividy. Noho izany antony izany dia tsy manome antoka isika ny fotoana marina handefasana; Ny adiresy famindrana dia ny andraikitry ny orinasa mpamonjy entana.
HAHALALA AN'I TRAIMA?
Ny vokatra tsirairay dia azo alaina avy amin'ny foibe fahatanterahana samihafa manerana ny tany satria ny ekipan'ny fikarohana dia mandany fotoana ahafahana manome loharanom-pamokarana mahavelona. Na dia tsy vitantsika aza ny manara-maso ny vokatrao, ny orinasanay dia antoka tanteraka amin'ny fonosana ary ny zavatra tsy hita dia havadika ho anao.
INONA NO HANAMPY ANTSIKA HO AMIN'NY FITAOVANA?
Ny tolotra torolàlana dia miankina amin'ny foibe fahatanterahantsika. Izany dia satria avy any amin'ny firenena samihafa ny vokatra azontsika mba hahazoana antoka fa hahazo ny vidiny tsara indrindra ianareo. Ny serivisy fampitaovana dia tsy mitovy amin'ny firenena. Raha tsy misy orinasam-barotra mahery vaika amin'ny serivisy iraisam-pirenena dia tsy afaka mahazo tombombarotra tsaratsara kokoa noho izany izahay amin'ny haingam-pandeha izay ho very any amin'ny tsena iraisam-pirenena toy ny Amazon sy ny sisa.
Na izany aza dia mbola manome antoka ihany koa izahay fa handray ny fonosana ianareo ary hanome antoka ny fonosana raha sendra tsy hita sy ny kitapo very
NANDRITRA IZAY IZAY 1 ITEM, ary IZAHO IZAY NAMOAKA IZANY IZANY, FA NAHOANA?
Manao izay tsara indrindra vitantsika isika mba hampihenana ny fandaniana amin'ny fiafaranareo ka tsy mila mandoa hetra avo / premiums ianareo mba hahazoanareo zavatra! Raha mametraka baolina miaraka aminay ianao ho an'ny zavatra marobe, dia mihoatra noho ny azo inoana fa alefa any amin'ny fonosana mihoatra ny iray. Azafady azafady mba hahitanao fotoana kely hahatongavana amin'ny zavatra rehetra.
AO AMY IZAY MANAIKY ANTSIKA TOKONY HIARAKA AMIN'IZAO TONTOLO IZAO?
Ny vidin-javatra naseho tamin'ny takelaka tsirairay mety Aza samy hafa amin'izay nandidianao, fa aza manahy! Amin'ny ankapobeny ny zavatra hataon'ny foibe dia ny fanamarihana ho faratampony farafahakeliny, na hanamarika ireo zavatra ireo ho fanomezam-pahasoavana tanteraka. Izany dia ny hisorohana ny fandaniana amin'ny vola / fampiasam-bola manokana amin'ny farany, toy ny any amin'ny firenena sasany, ireo fiampangana fanampiny ireo dia tena lafo be.
NIADY TSY MISY IZANY, TSY MISY INTSONY IZAY TSY MISY IZAY TSY MANAIKY IZANY ... INONA NO AZONAO ATAO?
Azafady azafady azafady ny mailakao rehefa mametraka baiko ianao. Asehoy tsara ny ordinateran'ny SPAM mba hahitana raha alefan'ny mailaka fanamafisana. Raha mbola tsy misy mailaka fanamafisana, azafady alefaso ny ekipa mpanohana amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tranokalanay
INONA NO AZONAO ATAO TSARA AMIN'NY FITAOVANA?
Any an-trano dia afaka mandray ilay fonosana amin'ny anaran'ny mpanjifa. Matetika ny peta-drindrina dia handao famoriam-bola raha tsy misy olona ao an-trano ary afaka manangona ny parcelanao amin'ny biraonao akaiky anao indrindra ianao.
MIEZAKO NY FANDRESANA / ADDRESS aho, azoko ve?
Na dia mamporisika anareo hanamarina ny habeny sy ny adiresy alohan'ny hametrahana baiko miaraka amintsika aza izahay, dia takatsika tsara fa misy ny zava-mitranga ary misy ny fahadisoana azo atao. Manao ny baiko amin'ny andro mitovy azy ireo izahay. Raha mila fanovana ny baikonao, miangavy anao amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana amin'ny tranokalanay ASAP ary hanao izay tsara indrindra vitantsika isika hiatrehana izany fiovana izany, fa tsy afaka manao fampanantenana. Raha efa nalefa tany amin'ny foibe fanatanterahana ny singa (s) dia tsy afaka manova ny baiko isika. Amin'io tranga io dia azonao atao ny mandefa ny zavatra tsy mety ao amin'ny Warehouse Regional akaiky indrindra ary afaka mandray an-tsoratra ny fanitsiana. Azafady mba mifandraisa aminay mba hahafantarana hoe aiza no misy ny Regional Warehouse akaiky indrindra avy amin'ny firenenao.
TSY MISY FANONTANIANA TSY MANAIKY AMINAREO AMINAREO AMINAREO SAKAFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,
Azafady mba mifandraisa aminay ary ho faly izahay hamaly ny fanontanianao :)